Archives tsara tarehy sy lamaody - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY FITAFIANA sy FANAFODY
Baya na ny kanto fanodikodinana afrikana
Mba hamitahana lehilahy dia manana toro-hevitra maromaro ny vehivavy. Samy misafidy izay toa mahomby indrindra. Ny makiazy, akanjo, taovolo dia tonga handravaka ny filaharany. Ny paikady sasany dia iraisan'ny rehetra. Ny hafa ...
Azontsika atao ve ny "manafotsy" ny hoditra?
Hamiratra ny hodiny. Ahoana koa ny hanaitra azy nefa tsy mahasarika ny fahatezeran'ny Afro-feminisista, dermatologists, sociologists na tovovavy Nappy aza? Lavitry ny maha-manokana an'i Afrika azy, fanazaran-tena ny fanadiovana ...
Volo mamelombelona: Ny valifaty ny vehivavy mainty hoditra
Ny mainty hoditra dia miaina ao anatin'ny tontolo iray izay tsy nametrahany ny fitsipika Raha mitohy ny fampiharana ankehitriny, ho an'ny siansa Juliette Smeralda, mpanoratra momba ny sanganasa antropolojia ...
Famerenana 9 hanesorana môle
Ny mainty dia mainty na volontany mivolontsaina izay miovaova sy karazana ary mipoitra eo amin'ny hoditra manodidina ny 20 na 30 taona.
Tombontsoa azo avy amin'ny menaka baobab ho an'ny volo sy hoditra
Ny baobab, hazo angano avy amin'ny fianakaviana Bombacaceae, teraka tany Afrika sy Madagasikara. Mariky ny Senegaly. Ny anarany dia avy amin'ny arabo "bu hibab" izay ...
Ny tombony azo avy amin'ny menaka argan
Nampiasaina nandritra ny taonjato maro ny vehivavy Berber mba hamelomana indray ny volon'izy ireo, hanatanjaka ny volon'izy ireo ary hiaro tena amin'ny masoandro sy ny rivotra, ny menaka argan dia miangona tsikelikely amin'ny toerana ho an'ny tenany ...
Tombontsoa azo avy amin'ny menaka Moringa amin'ny volo sy hoditra
Zavamaniry trondro, "Havaky ny lanitra" na "Hazo Mandrakizay", avy amin'ny fianakavian'i Moringaceae, ny Moringa dia teraka avy any avaratra atsinanan'i India, fa maniry koa any Afrika, Madagasikara, Azia ...
Tombontsoa azo avy amin'ny menaka neem ho an'ny volo sy hoditra
Ny neem, antsoina koa hoe "neem" na "lilac of persia" dia hazo avy amin'ny Indies izay niafarana toy ny hazo sava ho an'ny alokalony. Manohitra izy ...
Usa: Ny endriky ny hatsaratry ny Ethnic dia mampiditra ny biraon'ny hatsarana
Milatsaka ny rindrina, saingy vao nanomboka ny asantsika. Ny hafatra maneho ny lahatsarin'ny sheamoisture #BreakTheWalls dia miteny be. Amin'ny alàlan'ny fifindrana avy amin'ny departemantan'ny vokatra ara-poko mankany amin'ny sampana hatsaran-tarehy, ny ...
Anarana sy ny tantaran'ny fanamafisana
Iza no namorona ny relaks? Lehilahy ve, vehivavy…? Azo antoka fa Amerikanina! Angano maro no manodidina ity fahaterahana ity, izay ilaintsika tokoa amin'ny fanaintainana ... Rehefa ...
Fanafody dimy hampitombo ny volonao haingana
Ireto misy fanafody dimy ao an-trano izay manampy anao hampitombo haingana ny volonao: 1 - Tongolo sy ranom-boasarimakirana Ny ranom-boankazo manana solifara izay manaitaitra ...
Ny niandohana sy ny tantaran'ilay fehiloha
Ny teny hoe loincloth dia avy amin'ny Paolo espaniola (pagno) izay midika hoe "tapa-damba" na tapa-lamba. Ampiasaina any amin'ny faritr'i Afrika atsimon'i Sahara sy amin'ireo Indiana izay ...
Ny Wodaabe sy ny kanto amin'ny hatsarana
Ny Wodaabe (Fulani: Woɗaaɓe, ny Boɗaaɗo) dia vondrona iray an'ny Fulani. Indraindray dia antsoina hoe Bororos izy ireo indraindray - tsy afangaro amin'ny ...